Mayelana neRetetín | Iresiphi
Iresiphi Kuyibhulogi lapho uzothola khona izindlela eziningi zokupheka zezingane nalabo abangebancane kangako, ukupheka amaqhinga nolwazi mayelana nakho konke okuphathelene nezwe lokupheka.
Uma ufuna ukwazi konke okwenzekayo emhlabeni wokupheka bhalisa ezincwadini zethu nge-imeyili yakho, lapho uzothola khona ngokushesha zonke izindlela zokupheka, izindlela zokupheka nezindaba ezithakazelisa kakhulu.
Sikhuluma ngani eRecetín?
En Iresiphi Uzothola izindlela zokupheka zokuqala, okwesibili, iziqalo, ama-dessert; izindlela zokupheka ezivela kuwo wonke umhlaba kanye namaqhinga wabancane ukuthi bafunde ukudla konke.
Izihloko esikhuluma ngazo ku-Recetín zingatholakala ekhasini lezingxenye zewebhu.
Siyabakhathalela abafundi ... okuningi
Iresiphi, ngaphezu kokuba yibhulogi lapho ungafunda futhi ufunde khona ngokupheka izindlela zokupheka, iphinde ihlose ukuba yingosi yokusiza abafundi bethu, indawo yokuphendula imibuzo futhi ikusize lapho udalela amamenyu wabancane, funda izindlela zokuba ukudla okunomsoco nokuzijabulisa ekhishini. Ungaphawula ngokushicilelwa, usithumelele izindaba, iziphakamiso, ukungabaza, izifiso noma izindlela zokupheka ngokusebenzisa kwethu ifomu lokuxhumana.
Zonke izindlela zokupheka ezitholakala ku-Recetin zidalwe yithi ithimba lokubhala. Bonke bangabapheki abanolwazi lweminyaka eminingi balungiselela izitsha eziklanyelwe izingane, ngakho-ke isiqinisekiso siphelele kubazali.
Ungayikhangisa kanjani inkampani noma umkhiqizo wakho eRecetín?
Uma inkampani yakho noma umkhiqizo uhlobene ngqo nezwe lokupheka, ungaxhumana nathi nge ifomu lokuxhumana futhi sizophendula ngokushesha okukhulu ngesiphakamiso sokukhangisa esenzelwe lokho okudingayo.
Uma ufuna ukuxhumana Iresiphi ungakwenza ngokusebenzisa i- ifomu lokuxhumana.